အမျိုးသား လွတ်လပ်ရေးနေ့များ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အမျိုးသား လွတ်လပ်ရေးနေ့များ စာရင်း
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်သည့်နေ့ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပကြခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအားလပ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိသည်။
အောက်ပါတို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့များ စာရင်း ဖြစ်သည်။
အက်ဘ်ခါဇီယာ 07-04 !ဇူလိုင် ၄ ၁၉၉၃ ၁၉၉၂–၁၉၉၃ အက်ဘ်ခါဇီယာစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးခြင်း။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ ၁၉၉၉ တွင်မှ တရားဝင်ကြေငြာ။ (အချို့သာ အသိအမှတ်ပြု) "လွတ်မြောက်ရေးနေ့" ဟုလည်း ခေါ်သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် 08-19 !ဩဂုတ် ၁၉ ၁၉၁၉ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၁၉ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ အာဖဂန်လွတ်လပ်ရေးနေ့
အယ်လ်ဘေးနီးယား 11-28 !နိုဝင်ဘာ ၂၈ ၁၉၁၂ ၁၉၁၂ တွင် Ismail Qemali မှ ကြေငြာပြီး ငါးရာစု အော့တမန် အုပ်ချုပ်မှုပြီးဆုံးကြောင်း ပြသ။
အယ်လ်ဂျီးရီးယား 07-05 !ဇူလိုင် ၅ ၁၉၆၂ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အင်ဂိုလာ 11-11 !နိုဝင်ဘာ ၁၁ ၁၉၇၅ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ 11-01 !နိုဝင်ဘာ ၁ ၁၉၈၁ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၈၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အာဂျင်တီးနား 07-09 !ဇူလိုင် ၉ ၁၈၁၆ စပိန်အင်ပါယာထံမှ ၁၈၁၆ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။
အာမေးနီးယား 05-28 !မေ ၂၈ ၁၉၁၈ ရုရှားအင်ပါယာထံမှ ၁၉၁၈ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။
အာမေးနီးယား 09-21 !စက်တင်ဘာ ၂၁ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ အမျိုးသားနေ့
ဩစတြီးယား 10-26 !အောက်တိုဘာ ၂၆ ၁၉၅၅ ၁၉၅၅ တွင် ကြားနေနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခြင်းကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ အဖြစ် ပြန်လည်ရရှိ။ အမျိုးသားနေ့
အဇာဘိုင်ဂျန် 05-28 !မေ ၂၈ ၁၉၁၈ ရုရှားအင်ပါယာထံမှ ၁၉၁၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာ။ Republic Day
အဇာဘိုင်ဂျန် 10-18 !အောက်တိုဘာ ၁၈ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ၁၉၉၁ တွင် ထပ်မံကြေငြာ။ အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့
ဘဟားမား 07-10 !ဇူလိုင် ၁၀ ၁၉၇၃ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဘာရိန်း 12-16 !ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ၁၉၇၁ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ ဘာရိန်းလွတ်လပ်ရေးနေ့
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 03-26 !မတ် ၂၆ ၁၉၇၁ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထံမှ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာပြီးနောက် ကိုးလစစ်ပွဲသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၁၉၇၁ တွင် ပြီးဆုံး။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့
ဘာဘေးဒိုးစ် 11-30 !နိုဝင်ဘာ ၃၀ ၁၉၆၆ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဘီလာရုဇ် 07-03 !ဇူလိုင် ၃ ၁၉၄၄ ၁၉၄၄ တွင် ဂျာမန်တို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်စိုးမှုမှ လွတ်မြောက်။ ဘယ်လာရုဇ်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့
ဘယ်လ်ဂျီယမ် 07-21 !ဇူလိုင် ၂၁ ၁၈၃၁ ယူနိုက်တက်နယ်သာလန်နိုင်ငံထံမှ အောက်တိုဘာ ၄၊ ၁၈၃၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး ၁၈၃၁ ဇူလိုင် ၂၁ တွင် Leopold of Saxe-Coburg-Saalfeld သည် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးဘုရင်အဖြစ် ကျမ်းကျိန်။ ဘယ်လ်ဂျီယံလွတ်လပ်ရေးနေ့
ဘလိဇ် 09-21 !စက်တင်ဘာ ၂၁ ၁၉၈၁ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၈၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ စက်တင်ဘာ အောင်ပွဲများ
ဘီနင် 08-01 !ဩဂုတ် ၁ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဘိုလီးဗီးယား 08-06 !ဩဂုတ် ၆ ၁၈၂၅ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား 03-01 !မတ် ၁ ၁၉၉၂ ယူဂိုစလားဗီးယားဆိုရှယ်လစ်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံထံမှ ၁၉၉၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား)
ဘော့ဆွာနာ 09-30 !စက်တင်ဘာ ၃၀ ၁၉၆၆ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဘရာဇီး 09-07 !စက်တင်ဘာ ၇ ၁၈၂၂ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံထံမှ စက်တင်ဘာ ၇၊ ၁၈၂၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး ဩဂုတ် ၂၉၊ ၁၈၂၅ တွင် အသိအမှတ်ပြုခံရ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဘရာဇီးနိုင်ငံ)
ဘရူနိုင်း 01-01 !ဇန်နဝါရီ ၁ ၁၉၈၄ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၈၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ တွင် ကျင်းပ။
ဘူဂေးရီးယား 09-22 !စက်တင်ဘာ ၂၂ ၁၉၀၈ အော့တမန် အင်ပိုင်ယာထံမှ ၁၉၀၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဘာကီးနားဖားဆို 08-05 !ဩဂုတ် ၅ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မြန်မာ 01-04 !ဇန်နဝါရီ ၄ ၁၉၄၈ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၄၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (မြန်မာနိုင်ငံ)
ဘူရွန်ဒီ 07-01 !ဇူလိုင် ၁ ၁၉၆၂ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကမ္ဘောဒီးယား 11-09 !နိုဝင်ဘာ ၉ ၁၉၅၃ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၅၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကင်မရွန်း 01-01 !ဇန်နဝါရီ ၁ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကနေဒါ 07-01 !ဇူလိုင် ၁ ၁၈၆၇ ၁၈၆၇ တွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ အမည်ခံလွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည်။ ကနေဒါနေ့
ကိတ်ဗာဒီ 07-05 !ဇူလိုင် ၅ ၁၉၇၅ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ 08-13 !ဩဂုတ် ၁၃ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ချဒ် 08-11 !ဩဂုတ် ၁၁ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ချီလီ 02-12 !ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ နှင့် စက်တင်ဘာ ၁၈ ၁၈၁၀ စပိန်နိုင်ငံထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ၁၈၁၀ တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ချီလီနိုင်ငံသားများကမူ ပထမဆုံး စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်စတင် အုပ်ချုပ်သည့် စက်တင်ဘာ ၁၈ တွင် ကျင်းပကြသည်။ အဆိုပါရက်ကို ဧပြီ ၂၅၊ ၁၈၄၄ အထိ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေ။
ကိုလံဘီယာ 07-20 !ဇူလိုင် ၂၀ နှင့် ဩဂုတ် ၇ ၁၈၁၀ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၁၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကိုမိုရို 07-06 !ဇူလိုင် ၆ ၁၉၇၅ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ 06-30 !ဇွန် ၃၀ ၁၉၆၀ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကွန်ဂို 08-15 !ဩဂုတ် ၁၅ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကော့စတာရီကာ 09-15 !စက်တင်ဘာ ၁၅ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ခရိုအေးရှား 10-08 !အောက်တိုဘာ ၈ ၁၉၉၁ ယူဂိုစလားဗီးယားဆိုရှယ်လစ်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ)
ကျူးဘား 05-20 !မေ ၂၀ ၁၉၀၂ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၀၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆိုက်ပရပ်စ် 10-01 !အောက်တိုဘာ ၁ ၁၉၆၀ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ဩဂုတ် ၁၆၊ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သော်လည်း ဆိုက်ပရပ်စ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 10-28 !အောက်တိုဘာ ၂၈ ၁၉၁၈ ချက်ကိုဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် ဩစတြီးယားဟန်ဂေရီနိုင်ငံထံမှ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၁၉၁၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်း အတွက်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 01-01 !ဇန်နဝါရီ ၁ ၁၉၉၃ ချက်သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံအနေဖြင့်ချက်ကိုဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံမှ ၁၉၉၃ တွင် ခွဲထွက်ခဲ့ခြင်း အတွက်။
ဂျီဘူတီ 06-27 !ဇွန် ၂၇ ၁၉၇၇ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၇ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဒိုမီနီကာ 11-03 !နိုဝင်ဘာ ၃ ၁၉၇၈ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ 12-01 !ဒီဇင်ဘာ ၁ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ 02-27 !ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ၁၈၄၄ ဟေတီနိုင်ငံမှ ၂၂ နှစ်ကြာ အုပ်စိုးပြီးနောက် ၁၈၄၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးထပ်မံကြေငြာ။
အရှေ့တီမော 05-20 !မေ ၂၀ ၂၀၀၂ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံထံမှ ၂၀၀၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အီကွေဒေါ 08-10 !ဩဂုတ် ၁၀ ၁၈၀၉ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ဩဂုတ် ၁၀၊ ၁၈၀၉ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ဩဂုတ် ၂၊ ၁၈၁၀ တွင် လှုပ်ရှားကြံစည်သူများအားလုံးကို သေဒဏ်စီရင်ခဲ့သဖြင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
အီကွေဒေါ 05-24 !မေ ၂၄ ၁၈၂၂ မေ ၂၄၊ ၁၈၂၂ ပီချင်းချာတိုက်ပွဲတွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။
အယ်ဆာဗေဒို 09-15 !စက်တင်ဘာ ၁၅ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အီကွေတာဂီနီ 10-12 !အောက်တိုဘာ ၁၂ ၁၉၆၈ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အီရီထရီးယား 05-24 !မေ ၂၄ ၁၉၉၃ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံထံမှ ၁၉၉၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (အီရီထရီးယားနိုင်ငံ)
အက်စတိုးနီးယား 02-24 !ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ၁၉၁၈ ရုရှားအင်ပါယာထံမှ ၁၉၁၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံ)
အက်စတိုးနီးယား 08-20 !ဩဂုတ် ၂၀ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေး ထပ်မံကြေငြာ။
ဖီဂျီ 10-10 !အောက်တိုဘာ ၁၀ ၁၉၇၀ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဖင်လန် 12-06 !ဒီဇင်ဘာ ၆ ၁၉၁၇ ရုရှားနိုင်ငံထံမှ ၁၉၁၇ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၁၉၁၈ တွင် အသိအမှတ်ပြုခံရ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဖင်လန်နိုင်ငံ)
ဂါဘွန် 08-17 !ဩဂုတ် ၁၇ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂမ်ဘီယာ 02-18 !ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၉၆၅ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂျော်ဂျီယာ 05-26 !မေ ၂၆ ၁၉၁၈ ဂျော်ဂျီယာဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံထံမှ ၁၉၁၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ကြေငြာ။
ဂျော်ဂျီယာ 04-09 !ဧပြီ ၉ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂါနာ 03-06 !မတ် ၆ ၁၉၅၇ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၅၇ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂရိ 03-25 !မတ် ၂၅ ၁၈၂၁ အော့တမန် အင်ပိုင်ယာထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။
ဂရီနေဒါ 02-07 !ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ၁၉၇၄ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဂရီနေဒါနိုင်ငံ)
ဂွါတီမာလာ 09-15 !စက်တင်ဘာ ၁၅ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂီနီ 10-02 !အောက်တိုဘာ ၂ ၁၉၅၈ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၅၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂီနီ-ဘီစော 09-24 !စက်တင်ဘာ ၂၄ ၁၉၇၃ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံထံမှ လွတ်လပ်ကြောင်း ၁၉၇၃ တွင် ကြေငြာ။
ဂိုင်ယာနာ 05-26 !မေ ၂၆ ၁၉၆၆ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဟေတီ 01-01 !ဇန်နဝါရီ ၁ ၁၈၀၄ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၀၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဟွန်ဒူးရပ်စ် 09-15 !စက်တင်ဘာ ၁၅ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဟန်ဂေရီ 08-20 !ဩဂုတ် ၂၀ ၁၀၀၀ ခရစ်ယာန်ဟန်ဂေရီ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် ဟန်ဂေရီ၏ ပထမဆုံး ခရစ်ယာန်ဘုရင် စိန့်စတီဖန် နေ့ရက် အမျိုးသားနေ့
အိုက်စလန် 06-17 !ဇွန် ၁၇ ၁၉၄၄ ၁၉၄၄ တွင် သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း။
အိန္ဒိယ 08-15 !ဩဂုတ် ၁၅ ၁၉၄၇ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၄၇ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (အိန္ဒိယနိုင်ငံ)
အင်ဒိုနီးရှား 08-17 !ဩဂုတ် ၁၇ ၁၉၄၅ နယ်သာလန်နိုင်ငံထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ဩဂုတ် ၁၇၊ ၁၉၄၅ တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံဖက်မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံ အဖြစ် ၁၉၄၉ တွင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ဒတ်ခ်ျအစိုးရက ဩဂုတ် ၁၇၊ ၁၉၄၅ သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဖြစ်ကြောင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
အီရတ် 10-03 !အောက်တိုဘာ ၃ ၁၉၃၂ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၃၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အိုင်ယာလန် 04-24 !ဧပြီ ၂၄ ၁၉၁၆ United Kingdom of Great Britain and Ireland ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
အစ္စရေး 05-14 !Iyar 5
(ဟီဘရူးပြက္ခဒိန် အပေါ်မူတည်၍ ဧပြီ ၁၅ နှင့် မေ ၁၅ အကြား 1948 !၅၇၀၈ (၁၉၄၈) ပါလက်စတိုင်း ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ခွင့်မှ မေ ၁၄၊ ၁၉၄၈ (ဟီဘရူးပြက္ခဒိန်တွင်5Iyar 5708)တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Yom Ha'atzmaut
အိုင်ဗရီကို့စ် 08-07 !ဩဂုတ် ၇ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂျမေကာ 08-06 !ဩဂုတ် ၆ ၁၉၆၂ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဂျော်ဒန် 05-25 !မေ ၂၅ ၁၉၄၆ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၄၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကာဇက်စတန် 12-16 !ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကင်ညာ 12-12 !ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ၁၉၆၃ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Jamhuri Day
ကီရီဘတ်စ် 07-12 !ဇူလိုင် ၁၂ ၁၉၇၉ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၉ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မြောက်ကိုရီးယား 08-15 !ဩဂုတ် ၁၅ ၁၉၄၅ ၁၉၄၈ တွင် ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း။ ကိုရီးယားစစ်ပွဲ ၁၉၅၀-၁၉၅၃
တောင်ကိုရီးယား 08-15 !ဩဂုတ် ၁၅ ၁၉၄၅ ဂျပန်အင်ပါယာထံမှ ၁၉၄၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ယာယီအစိုးရ ကို ၁၉၁၉ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကိုရီးယား စစ်ပွဲ ၁၉၅၀-၁၉၅၃။
ကိုဆိုဗို 02-17 !ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၂၀၀၈ ဆားဘီးယားနိုင်ငံထံမှ ၂၀၀၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကူဝိတ် 02-25 !ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ၁၉၆၁ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ကာဂျစ္စတန် 08-31 !ဩဂုတ် ၃၁ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
လာအို 10-22 !အောက်တိုဘာ ၂၂ ၁၉၅၃ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၁၉၅၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
လတ်ဗီယာ 11-18 !နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၁၉၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၁၉၁၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးကြေငြာ။
လတ်ဗီယာ 05-04 !မေ ၄ ၁၉၉၀ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ လွတ်လပ်ရေးကို မေ ၄၊ ၁၉၉၀ တွင် ပြန်လည်ရရှိ။
လက်ဘနွန် 11-22 !နိုဝင်ဘာ ၂၂ ၁၉၄၃ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၄၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
လီဆိုသို 10-04 !အောက်တိုဘာ ၄ ၁၉၆၆ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
လိုက်ဘေးရီးယား 07-26 !ဇူလိုင် ၂၆ ၁၈၄၇ အမေရိကန် ကိုလိုနီပြုရေးအဖွဲ့ထံမှ ၁၈၄၇ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
လစ်ဗျား 12-24 !ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ၁၉၅၁ အီတလီနိုင်ငံထံမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၁၉၄၇ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ၊ ဗြိတိသျှနှင့် ပြင်သစ်ထံမှ ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၁၉၅၁ တွင် လွတ်မြောက်။
လစ်သူယေးနီးယား 02-16 !ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၁၉၁၈ ၁၉၁၈ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ရုရှားအင်ပါယာနှင့် ဂျာမန်အင်ပါယာတို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
လစ်သူယေးနီးယား 03-11 !မတ် ၁၁ ၁၉၉၀ ၁၉၉၀ မတ်တွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မက်စီဒိုးနီးယား 09-08 !စက်တင်ဘာ ၈ ၁၉၉၁ ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင်ငံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Den na nezavisnosta သို့မဟုတ် Ден на независноста
မဒါဂတ်စကား 06-26 !ဇွန် ၂၆ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မာလဝီ 07-06 !ဇူလိုင် ၆ ၁၉၆၄ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မလေးရှား 08-31 !ဩဂုတ် ၃၁ ၁၉၅၇ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၅၇ တွင် မ‌လေးရှားဖက်ဒ‌ရေးရှင်းအဖြစ် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Hari Merdeka
မလေးရှား 09-16 !စက်တင်ဘာ ၁၆ ၁၉၆၃ မ‌လေးရှားဖက်ဒ‌ရေးရှင်း၊ ဆာဘား၊ ဆာရာဝပ် နှင့် စင်ကာပူတို့ဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်း။ Hari Malaysia
မော်လဒိုက် 07-26 !ဇူလိုင် ၂၆ ၁၉၆၅ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မာလီ 09-22 !စက်တင်ဘာ ၂၂ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မော်လတာ 09-21 !စက်တင်ဘာ ၂၁ ၁၉၆၄ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (မော်လတာနိုင်ငံ)
မော်ရီတေးနီးယား 11-28 !နိုဝင်ဘာ ၂၈ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မောရစ်ရှ 03-12 !မတ် ၁၂ ၁၉၆၈ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မက္ကဆီကို 09-16 !စက်တင်ဘာ ၁၆ ၁၈၁၀ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၁၀ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်းကြေငြာ။ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၁၈၂၁ တွင် အသိအမှတ်ပြုခံရ။ Grito de Dolores
မော်လ်ဒိုဗာ 08-27 !ဩဂုတ် ၂၇ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (မော်လ်ဒိုဗာသမ္မတနိုင်ငံ)
မွန်ဂိုးလီးယား 12-29 !ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ၁၉၁၁ ၁၉၁၁ တွင် ချင်းမင်းဆက်ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ သို့သော်လည်း မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ အစိုးရသစ်သည် ၁၉၁၉ တွင် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ၁၉၂၁ တွင် ရုရှားဖြူတို့မှ ကျူးကျော်မှုကို မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပေ။ ၁၉၂၁ ဇွန် ၁၁ တွင် ကွန်မြူနစ်အစိုးရသစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
မွန်တီနီဂရိုး 05-21 !မေ ၂၁ ၂၀၀၆ ဆားဘီးယားနှင့် မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံထံမှ ၂၀၀၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မော်ရိုကို 11-18 !နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၁၉၅၅ ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် စပိန်နိုင်ငံတို့ထံမှ ၁၉၅၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မိုဇမ်ဘစ် 06-25 !ဇွန် ၂၅ ၁၉၇၅ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
နမီးဘီးယား 03-21 !မတ် ၂၁ ၁၉၉၀ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံထံမှ ၁၉၉၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
နအူရူးနိုင်ငံ 01-31 !ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၁၉၆၈ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် နှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
နီကာရာဂွါ 09-15 !စက်တင်ဘာ ၁၅ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
နိုင်ဂျာ 08-03 !ဩဂုတ် ၃ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
နိုင်ဂျီးရီးယား 10-01 !အောက်တိုဘာ ၁ ၁၉၆၀ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ် 09-02 !စက်တင်ဘာ ၂ ၁၉၈၃ ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံထံမှ ၁၉၈၃ တွင် လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာ။ (အချို့သာ အသိအမှတ်ပြု)
နော်ဝေ 05-17 !မေ ၁၇ ၁၈၁၄ ဖွဲ့စည်းပုံ နေ့ရက်/အမျိုးသားနေ့။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၁၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၀၅ ဇွန်လအထိ ဆွီဒင်နိုင်ငံနှင့် ပူးတွဲဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန် 08-14 !ဩဂုတ် ၁၄ ၁၉၄၇ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ဩဂုတ် ၁၄၊ ၁၉၄၇ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Youm-e-Azadi
ပနားမား 11-28 !နိုဝင်ဘာ ၂၈ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ပနားမား 11-03 !နိုဝင်ဘာ ၃ ၁၉၀၃ ၁၉၀၃ အထိ ပနားမားသည် "Gran Colombia" အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် ကိုလံဘီယာခွဲထွက်ခြင်းကို တရားဝင်အားလပ်ရက်အဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည်။
ပါပူအာ နယူးဂီနီ 09-16 !စက်တင်ဘာ ၁၆ ၁၉၇၅ ဩစတြေးလျနိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ပါရာဂွေး 05-15 !မေ ၁၅ ၁၈၁၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၁၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Día de Independencia
ပီရူး 07-28 !ဇူလိုင် ၂၈ ၁၈၂၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Fiestas Patrias
ဖိလစ်ပိုင် 06-12 !ဇွန် ၁၂ ၁၈၉၈ စပိန်နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်သည့် ဖိလစ်ပိုင်တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း Emilio Aguinaldo ၏ ၁၈၉၈ ကြေငြာချက်ကို အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံသည် ၁၉၄၆ ဇူလိုင် ၄ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ လွတ်လပ်ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်အထိ ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့ကို လွတ်လပ်ရေးနေ့အဖြစ် ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ Araw ng Kalayaan
ပိုလန် 11-11 !နိုဝင်ဘာ ၁၁ ၁၉၁၈ ရုရှား၊ ပရက်ရှားနှင့် ဩစတြီးယားတို့၏ ၁၂၃ နှစ်ကြာ ခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှု အပြီး ၁၉၁၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Święto Niepodległości (လွတ်လပ်ရေးနေ့)
ပေါ်တူဂီ 12-01 !ဒီဇင်ဘာ ၁ ၁၆၄၀ လီယွန်ဘုရင့်နိုင်ငံထံမှ ရရှိသည့် မူလလွတ်လပ်ရေးကို အောက်တိုဘာ ၅၊ ၁၁၄၃ တွင် အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ အိုင်ဘေးရီးယန်းယူနီယံနှင့် စပိန်နိုင်ငံတို့ထံမှ ၁၆၄၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးပြန်လည် ရရှိ။
ကာတာ 12-18 !ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ၁၉၇၁ မူလ လွတ်လပ်ရေးကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ စက်တင်ဘာ ၇ တွင်ရရှိ။ ကာတာအမျိုးသားနေ့
ရိုဒီးရှား 11-11 !နိုဝင်ဘာ ၁၁ ၁၉၆၅ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့
ရိုမေးနီးယား 05-09 !မေ ၁၀ ၁၈၇၇
ရဝမ်ဒါ 07-01 !ဇူလိုင် ၁ ၁၉၆၂ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် 09-19 !စက်တင်ဘာ ၁၉ ၁၉၈၃ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၈၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
စိန့်လူစီယာ 02-22 !ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ၁၉၇၉ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၉ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် 10-27 !အောက်တိုဘာ ၂၇ ၁၉၇၉ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၉ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆမိုးအား 06-01 !ဇွန် ၁ ၁၉၆၂ နယူးဇီလန်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ 07-12 !ဇူလိုင် ၁၂ ၁၉၇၅ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆီနီဂေါ 04-04 !ဧပြီ ၄ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆားဘီးယား 02-15 !ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၁၈၀၄ ၁၈၀၄ တွင် ပထမဆားဘီးယားထကြွမှု စတင်ပြီး၊ ဆားဘီးယားတော်လှန်ရေးသို့ ပြောင်းလဲသွားကာ အော့တမန် အင်ပိုင်ယာထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ Statehood Day
ဆေးရှဲ 06-29 !ဇွန် ၂၉ ၁၉၇၆ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆီရာလီယွန် 04-27 !ဧပြီ ၂၇ ၁၉၆၁ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
စင်ကာပူ 08-09 !ဩဂုတ် ၉ ၁၉၆၅ ၁၉၆၅ တွင် မလေးရှားဖက်ဒရေးရှင်းထံမှ ခွဲထုတ်/နှင်ထုတ်ခံရကာ မြို့ပြနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် အမျိုးသားနေ့ (စင်ကာပူနိုင်ငံ)
ဆလိုဗက်ကီးယား 07-17 !ဇူလိုင် ၁၇ ၁၉၉၂ ၁၉၉၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခြင်း။
ဆလိုဗေးနီးယား 12-26 !ဒီဇင်ဘာ ၂၆ နှင့် ဇွန် ၂၅ ၁၉၉၀ ၁၉၉၀ တွင် လွတ်လပ်ရေး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ရလဒ်များ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီး ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင်ငံ မှ ခွဲထွက်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင်ငံမှ လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။ လွတ်လပ်ရေးနှင့် စည်းလုံးရေးနေ့
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု 07-07 !ဇူလိုင် ၇ ၁၉၇၈ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆိုမာလီယာ 07-01 !ဇူလိုင် ၁ ၁၉၆၀ Union of the Trust Territory of Somalia (ယခင် အီတလီဆိုမာလီနယ်မြေနှင့် ဗြိတိသျှဆိုမာလီနယ်မြေ)။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကို နှစ်စဉ် အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်သည်။
တောင်အာဖရိက 12-11 !ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ၁၉၃၁ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၃၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ အများပြည်သူ အားလပ်ရက်မဟုတ်ပေ။ တောင်အာဖရိကသမဂ္ဂကို ၁၉၁၀ မေ ၃၁ တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး တောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံကို ၁၉၆၁ မေ ၃၁ တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
တောင်ဆူဒန် 07-09 !ဇူလိုင် ၉ ၂၀၁၁ ဆူဒန်နိုင်ငံထံမှ ၂၀၁၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
သီရိလင်္ကာ 02-04 !ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ၁၉၄၈ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၄၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)
ဆူဒန် 01-01 !ဇန်နဝါရီ ၁ ၁၉၅၆ အီဂျစ်နိုင်ငံနှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့ထံမှ ၁၉၅၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆူရာနမ် 11-25 !နိုဝင်ဘာ ၂၅ ၁၉၇၅ နယ်သာလန်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၇၅ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆွာဇီလန် 09-06 !စက်တင်ဘာ ၆ ၁၉၆၈ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဆွီဒင် 06-06 !ဇွန် ၆ ၁၅၂၃ ၁၅၂၃ တွင် Gustav Vasa ကို ဘုရင်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း။ ဆွီဒင်အမျိုးသားနေ့
ဆွစ်ဇာလန် 08-01 !ဩဂုတ် ၁ ၁၂၉၁ ၁၂၉၁ တွင် Holy Roman Empire ဆန့်ကျင်မဟာမိတ်ပြုခြင်း။ ဆွစ်အမျိုးသားနေ့
ဆီးရီးယား 04-17 !ဧပြီ ၁၇ ၁၉၄၆ ၁၉၄၆ တွင် ပြင်သစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်အောက်မှ ပြီးဆုံး။ Evacuation Day
တာဂျစ်ကစ္စတန် 09-09 !စက်တင်ဘာ ၉ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
တန်ဇေးနီးယား 12-09 !ဒီဇင်ဘာ ၉ ၁၉၆၁ ၁၉၆၁ တွင် တန်ဂန်ရီကာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ရရှိ။
တိုဂို 04-27 !ဧပြီ ၂၇ ၁၉၆၀ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၆၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
တိဘက် 02-13 !ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၁၉၁၃ ချင်းမင်းဆက်၏ မန်ချူးတို့ထံမှ ၁၉၁၃ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ ၁၉၅၀ အောက်တိုဘာတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ခဲ့ကာ ယခုအချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ အုပ်ချုပ်လျက်ရှိ။ တိဘက်လွတ်လပ်ရေးနေ့
တုံဂါနိုင်ငံ 06-04 !ဇွန် ၄ ၁၉၇၀ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ အထိန်းသိမ်းခံနိုင်ငံအဖြစ်မှ ၁၉၇၀ တွင် ရပ်ဆိုင်းခြင်း။
ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို 08-31 !ဩဂုတ် ၃၁ ၁၉၆၂ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
တူနီးရှား 03-20 !မတ် ၂၀ ၁၉၅၆ ပြင်သစ်နိုင်ငံထံမှ ၁၉၅၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
တူရကီ 10-29 !အောက်တိုဘာ ၂၉ ၁၉၂၃ အီစတန်ဘူးလ်အစိုးရ ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ကြေငြာ။ အမျိုးသား အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နေ့
တာ့ခ်မင်နစ္စတန် 10-27 !အောက်တိုဘာ ၂၇ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ)
တူဗားလူ 10-01 !အောက်တိုဘာ ၁ ၁၉၇၈ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၈ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ယူဂန်းဒါး 10-09 !အောက်တိုဘာ ၉ ၁၉၆၂ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၂ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ယူကရိန်း 08-24 !ဩဂုတ် ၂၄ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။ ယူကရိန်း လွတ်လပ်ရေးနေ့
ယူကရိန်း 01-22 !ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၁၉၁၉ ၁၉၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၂ တွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံ ပေါင်းစည်းခြင်း။ ယူကရိန်းစည်းလုံးရေးနေ့
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 12-02 !ဒီဇင်ဘာ ၂ ၁၉၇၁ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၇၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။ အမျိုးသားနေ့
အမေရိကန် 07-04 !ဇူလိုင် ၄ ၁၇၇၆ ဂရိတ်ဗြိတိန်ဘုရင့်နိုင်ငံ (ယခု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ထံမှ ၁၇၇၆ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ကြေငြာ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ သို့မဟုတ် Fourth of July
ဥရုဂွေး 08-25 !ဩဂုတ် ၂၅ ၁၈၂၅ ဘရာဇီးနိုင်ငံထံမှ ၁၈၂၅ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။ ၁၈၂၈ တွင် အသိအမှတ်ပြုခံရ။ Declaratoria de la Independencia
ဥဇဘက်ကစ္စတန် 09-01 !စက်တင်ဘာ ၁ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံထံမှ ၁၉၉၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဗနွားတူနိုင်ငံ 07-30 !ဇူလိုင် ၃၀ ၁၉၈၀ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ထံမှ ၁၉၈၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဗင်နီဇွဲလား 07-05 !ဇူလိုင် ၅ ၁၈၁၁ စပိန်နိုင်ငံထံမှ ၁၈၁၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ကြေငြာ။
ဗီယက်နမ် 09-02 !စက်တင်ဘာ ၂ ၁၉၄၅ ဂျပန်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ထံမှ ၁၉၄၅ တွင် လွတ်လပ်ကြောင်း ကြေငြာ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ)
ယီမင် 11-30 !နိုဝင်ဘာ ၃၀ ၁၉၆၇ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၇ တွင် တောင်ယီမင်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိကြောင်း ကြေငြာ။
ဇမ်ဘီယာ 10-24 !အောက်တိုဘာ ၂၄ ၁၉၆၄ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၆၄ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
ဇင်ဘာဘွေ 04-18 !ဧပြီ ၁၈ ၁၉၈၀ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှ ၁၉၈၀ တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိ။
တရားဝင် အမျိုးသားနေ့ မရှိ
National holiday of member states။ ကုလသမဂ္ဂ။ June 14, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Abkhazia , Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO).
↑ Paraguay Independence Day
↑ Diosdado Macapagal, Proclamation No. 28 Declaring June 12 as Philippine Independence Day, Philippine History Group of Los Angeles, retrieved November 11, 2009
↑ Republic Act No. 4166 (August 4, 1964)။ August 5, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ In 1962, President Diosdado Macapagal signedaproclamation which declared Tuesday, June 12, 1962 asaspecial public holiday in commemoration of the declaration of independence from Spain on that date in 1898. That proclamation did not move the date of the Independence Day holiday in the Philippines. The date of the holiday was moved in 1964, with the signing of Republic Act No. 4166.
↑ Edgar, Adrienne Lynn (2004). Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton: Princeton University Press, 1. ISBN 0-691-11775-6။ “On October 27, 1991, the Turkmen Soviet Socialist Republic declared its independence from the Soviet Union.”
↑ Holidays။ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine။ 2008-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမျိုးသား_လွတ်လပ်ရေးနေ့များ_စာရင်း&oldid=402428" မှ ရယူရန်
၂၉ မေ ၂၀၁၈၊ ၂၂:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မေ ၂၀၁၈၊ ၂၂:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။